OEM Washington City Offices Akazadzisa FRP GRP nesefa fekitari uye vagadziri | Weijia
Walkway simbi nesefa paneeli
3D welded waya pajira riya fenzi
Washington City Offices Akazadzisa FRP GRP nesefa
Anti Skid Perforated Simbi Aluminium Grip Strut
Washington City Offices Akazadzisa epurasitiki (pfupi zita FRP / GRP) nesefa Panel. Saizi yakaenzana 30x38x38mm kana 38x38x38mm. Ruvara kupa yero, girini, pfumbu, nhema, tsvuku… Max saizi: 4 "x 12"
FRP panhivi nesefa iri ainyanya kushandiswa sezvo mugwagwa papuratifomu, nokuti nebwe tinopa Vinyl Ester nebwe, ISO (isophthalic) nebwe uye o-phthali (Orthophthalic) nebwe. Yakaumbwa frp nesefa uye pultruded frp neseve zviripo!
Iyo ine yakanakisa acid kuramba, alkali kuramba, organic solvent uye munyu kuramba; gasi uye mvura inoora zvinhu, uye ine zvisingaenzaniswi hukuru mumunda weanti-ngura.
Zvinoenderana nezvinodiwa zvenguva dzekushandisa chaidzo, o-phthalic, isophthalic, uye vinyl resin inogona kusarudzwa mune zvehupfumi sezvinhu zvematrice.
Lightweight, mukuru simba, uye nyore kutema uye kugadzwa
Sechinhu chakaumbwa neresin uye girazi faibha, kuwanda kwayo kuri pasi pe2 kg pa cubic decimeter, chete 1/4 yesimbi, 2/3 yealuminium. Simba rayo rinokwana kagumi rePVC yakaoma, uye simba rayo rakapfuura iro realuminium nesimbi yakajairwa. Kurema kwayo kurema kunogona kudzikisira hwaro hwesigiro, nekudaro ichideredza mutengo wezvinhu zveprojekiti.
Kucheka nekumisikidza kwayo kuri nyore, kungove kushoma kwebasa nemidziyo yemagetsi inodiwa, izvo zvinoderedza zvakanyanya mutengo wekumisikidza. Anti-kuchembera, hupenyu hwebasa hunopfuura makore makumi maviri.
Murazvo unodzora. Mwenje wekuparadzira murazvo weyakajairika murazvo-unodzora grille (ASTM E-84) haupfuure makumi maviri neshanu; iwo murazvo wekuparadzira mwero wepamberi murazvo-unodzora vinyl grille haupfuure 10. Iyo oxygen index haina kudzika pasi pe28 (GB 8924).
Iyo ine yakanakisa magetsi ekuputira uye hapana kuparara pasi pe10KV voltage; haina magetsi emagetsi uye inogona kushandiswa pamagetsi anonamira; iyo yakasarudzika dhizaini yegirazi faibha yakasimbiswa epurasitiki grille zvakare ine hunhu hweanti-slip uye anti-kuneta.
Ruvara runogona kusarudzwa zvisina tsarukano. Ruvara runogona kugadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi. Kazhinji, iwo mavara e FRP kugutsa ndeaya: yero, nhema, pfumbu, girini, bhuruu, tsvuku, uye yakajeka kana translucent. Munguva yekushandisa, rumwe ruvara runogona kushandiswa roga kana musanganiswa.
Yakasimba dhizaini-kugona Iyo saizi inochinjika uye dzakasiyana, zviri nyore kucheka, uye kugadzikana muhukuru
Taura nesu Nhasi! Tinogamuchira kubvunza kwako!
Pashure: Anti Skid Perforated Simbi Aluminium Grip Strut
Zvadaro: 3D welded waya pajira riya fenzi
Frp Kuumbwa nesefa
Frp Kuumbwa Gratings
Girazi Fiber Grating
Solar afoot FRP nesefa catwalk mugwagwa
Washington City Offices grp ukomba frp kuumbwa uriri nesefa